आईपीओ निष्कासनको तयारीमा रहेको एनआईसी एशिया लघुवित्तको नाफा ११ करोडभन्दा बढी - Aarthiknews
काठमाडौं । लघुवित्त क्षेत्रमा हालसम्मकै सबैभन्दा बढी आईपीओ जारी गर्न लागेको एनआईसी एशिया लघुवित्तले यस आर्थिक वर्षको ६ महीनामा रू. ११ करोड १२ लाख ७८ हजार खुद नाफा गरेको छ । गत वर्ष यसै अवधिमा कम्पनीले रू. ५ करोड ७७ लाख १० हजार नाफा गरेको थियो । गत वर्षभन्दा यस वर्ष कम्पनीको नाफा ९२ दशमलव ८२ प्रतिशत बढी भएको हो ।
हाल रू. १ अर्ब ४५ लाख चुक्तापूँजी रहेको यस कम्पनीले रू. ४७ करोड ५५ लाख बराबरको आईपीओ जारी गर्न माघ ७ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको छ । यस आईपीओलाई केयर रेटिङ नेपालले औषतभन्दा कम आधार जनाउने गे्रड ४ प्लस रेटिङ प्रदान गरेको छ । यो कम्पनी एनआईसी एशिया बैंकको सहायक कम्पनी हो ।
दोस्रो त्रैमाससम्म कम्पनीको जगेडा कोष रकम गत वर्षभन्दा ३१९ प्रतिशत बढेर रू. २१ करोड ८८ लाख ५७ हजार कायम भएको छ । यस वर्ष कम्पनीले गत वर्षभन्दा १८४ प्रतिशत बढी रू. ७९ करोड ४९ लाख ४५ हजार निक्षेप संकलन गरी ७० दशमलव ६७ प्रतिशत बढी रू. ५ अर्ब ३४ करोड ८० लाख ८४ हजार कर्जा प्रवाह गरेको छ ।
निष्क्रिय कर्जा शून्य दशमलव ५२ प्रतिशत कायम हुँदा कम्पनीले यस अवधिमा रू. १ करोड २२ लाख १६ हजार खराब कर्जा उठाएको छ । सम्भावित जोखिम शीर्षकमा कम्पनीले रू. २ करोड ३४ लाखभन्दा बढी रकम छुट्याएको छ ।